PSJTV | ग्रहणकालीन गुरुपुर्णिमा: मेरो मन्थन
ग्रहण हरेक बर्ष आऊंछन् ,जान्छन, तर वास्तविक प्रभाव पार्नेगरी थोरै गुरु मात्र आऊंछन् जीवनमा
शुक्रबार, ११ साउन २०७५ राजेश मिश्र
गुरु पूर्णीमाको मौकामा चन्द्र ग्रहण लागेको छ। त्यो पनि रातो। म अहिले बसेको विश्वको पश्चिमी भूभागमा मान्छेहरु केवल बैज्ञानिक रुपले मात्र सोच्छन भन्ने भ्रम मेरा धेरै नेपाली पाठकहरुलाई हुनसक्छ। यो सर्वथा गलत हो। ग्रहणलाग्दा रातो रंगको देखिने चन्द्रमाले पृथ्वीमा अनिष्ट निम्त्याउँछ भन्ने मान्यता यहाँ अझै कायम छ। उनीहरु यसलाई "ब्लड मून" भन्छन्।
आज बिहान करिब दूई घण्टा इसाईहरुले चलाएको 'वेब साईट' हेरेको, त्यहाँ त प्रलयको कुरा छ। गर्व गर्छु म, हाम्रा पूर्वीय खगोल शास्त्रीहरुले पृथ्वीको अक्षान्श र देशान्तर खुट्याउने, घडी, पल, अंश र दृष्टिको आधारमा ब्रह्माण्डको तत्कालीन समीकरण बुझ्ने गणीतीय पद्दति जिजस क्राईश्टको जन्म भन्दा दुई हजार बर्ष पहिलेनै पत्तो पाएका रहेछन।
पूर्वीय खगोल शास्त्रले शताब्दियौं सम्म चन्द्र अथवा सूर्य ग्रहण कुन मितिमा कतिबेला हुन्छ भन्ने तालीका प्रकाशित गरेको छ। यो गणीत र ज्यामितिमा आधारित बैज्ञानिक सूत्र थियो। अमेरिकाको सर्वाधिक शक्तिशाली "नेशनल एरोनोटिक्स एण्ड स्पेश एड्मिनिस्ट्रेशन" (नासा) अझैपनि संस्कृतमा लेखिएका यी क्यालेंडरहरुको आधारमा आफ्नो कार्यतालिका बनाउँछ।
सन् १९६९ मा नील आर्मस्ट्रंगलाई चन्द्रमा पुर्याउने नासा अझैपनि पूर्वीय खगोलाशास्त्रले प्रतिपादन गरेको सिद्दान्तलाई पछ्याउन बाध्य छ। अमेरिकी बैज्ञानिकहरुले आविष्कार गरेको यन्त्रले गति लिएको छ, तर दिशा पूर्वको खगोल शास्त्रमा आधारित छ।
रातो चन्द्रमाको भय
ईसाई शताब्दी भन्दा अठार शताब्दी अघि नै मौलाएको तर जीसस क्राईष्टको अवासानाप्को दूई शताब्दीभित्रै ओईलाएको मायाहरुको सभ्यता हिँसा र दमनको आधारमा खडा गरिएको एउटा ईतिहास थियो। अहिले मेक्सिको लगायत केन्द्रीय अमेरिकी भूभागमा पर्ने यो हराएको सभ्यतामा चन्द्र ग्रहणको बिशेष महत्व थियो। त्यसमाथि, रातो चंद्रग्रहणका बारेमा उनीहरुको आफ्नै परिभाषा थियो।
उनीहरुमाथि एउटा बिश्वास थोपरिएको थियो। चन्द्रग्रहणको बेला चन्द्रमा रातो देखियो भने, यसको अर्थ हो, उनीहरुको सभ्यताको कुनै शत्रु राक्षस चन्द्रमालाई आक्रमण गर्दैछ। राक्षसको दंशका कारण चन्द्रमा रक्तिम हुँदैछ। राक्षसलाई भगाउन उनीहरु त्यतिबेला कारागारका बन्दीहरुलाई पन्क्तिबद्द गरेर एउटा मचानमाथि शिरोच्छेदन गर्थे। त्यो चन्द्रमालाई राक्षसको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्ने एउटा परम्परा थियो।
ईसाईहरुले बाईबल लिएर अमेरिकाको दक्षिणतिरका मुलुक कब्जा गर्न थालेपछि पनि यो परम्परा कायम रह्यो। यसले ईसाई अतिक्रमणकारीहरुलाई आफना बिरोधी मात्र होईन, समूल जातीय संस्कृति उन्मूलन गर्ने एउटा उपाय दिएको थियो।
राजनीतिज्ञ धर्माधिकारीहरू समाजलाई आफ्नो वशमा पार्न मान्छेको मनमा डर उत्पन्न गर्छन। अहिलेको बिकसित अमेरिकामा पनि ठूला र धनी गीर्जाघरका संचालकहरु चन्द्रग्रहणको नाममा यस्तो भय उत्पन्न गर्न वेबसाईटहरुमार्फत प्रयत्नशील छन्।
पूर्वीय गोलार्धमा ग्रहणको नाममा मान्छेको बाली दिईएको उदाहरण छैन। तर यता भनिन्छ, ग्रहणका बेला खानेकुरा नखानु। यसको बैज्ञानिक कारण होला। ग्रहणका बेला हानिकारक बिकिरणहरु बायुमंडलमा तैरिन्छन्। यसले स्वास्थमा असर गर्नसक्छ।
तर, यसको तत्काल हुने हो वा कालान्तरमा यसबारेमा केही भनिएको छैन। ग्रहणकालमा याद गरेर खाना नखाने मान्छे पूर्वमा पनि शायदै होलान। अहिलेको समाजमा जीवन गतिशील छ। ग्रहणसंगै मान्छेको जीवन पनि आफ्नै रफ्तारमा चलायमान छ। विश्वको बढ्दो तापक्रम, कार्बन उत्सर्जनले दुषित तुल्याएको हावामा स्वास लिने बाध्यता, कृषि उत्पादनमा हालिएका बिषादी पचाउने पेटका धनी अहिलेको मान्छेको लागि ग्रहणका बेला उड्ने हानिकारक विकिरणको के अर्थ ?
सन्दर्भ गुरु पूर्णीमाको
अचेल गुरु को भन्दा पनि को गुरु होईन भन्ने बहस हुनुपर्ने हो। नेपालको राजधानीमा बितेको एकबर्षमा पच्चीस जना स्कूटी चलाउने युवा युवतीहरु निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने "टिपर"ले किचेर मरे। ती ठूला बाहनका चालकहरुलाई पनि गुरु भनिन्थ्यो। एकपटक नेपालगन्जबाट काठमाण्डौ आउँदा दिवंगत अभिनेता र विमानचालक रबी गिरिले चिनजानका आधारमा मलाई विमानको ककपीट्मै बसाए।
उनीसंग कुरा गर्न विमानको हेड्फ़ोन लगाउनुपर्ने थियो। आकाशमा उडिरहेका अरु विमानचालकहरुसंग पनि उनको बेला बेला सम्पर्क हुँदो रहेछ। मैले सुनेको, त्यो बेला पनि गिरि भन्दा कनिष्ठहरु उनलाई "सर" भनेर सम्बोधन गर्थे। तर उनका दौंतरीहरु बीच उनीहरुको कुराकानी "के छ त गुरु?" अनि "आज कतिओटा फ्लाईट त् गुरु?" अनि "पर्सी भेट्ने होईन त गुरु?" भन्ने लवजमा हुन्थ्यो। दु:ख्खको कुरा यीनै "गुरु" क्याप्टेन बिजय गिरि एकदिन आफै दुर्घटनामा परेर बिते।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि गुरुहरु छन्। यो क्षेत्र त झन् गुरुहरुको एकाधिकार नै भयो। तर हामीले उमेश श्रेष्ठ र गीता राना जस्ता गुरु अनि गुरुआमा पनि देखेको हो। जो राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा दिएर संसदमा पुगे। आफ्ना बिद्द्य्यार्थीका बाबुआमाको ढाड सक्ने शिक्षा नीति ल्याउन संसदमा लबीङ्ग गरे। सारवजनिक जग्गा जमीन लुटे। साना स्कूलहरुलाई कौडीको दाममा किनेर आफ्नो साम्राज्य बिस्तार गरे।
अहिले गुरु नामको शब्दको घोर अवमूल्यन भएको छ।
हरेकका आफ्नै गुरु
आज बिहान फेसबुक खोलेको, हरेकको लागि गुरुको परिभाषा आफ्नै छ। एकजनाले लेखेका रहेछन, "जांड खाएर बहस गर्नेहरु मेरा गुरु हुन्। उनीहरुले मलाई त्यो अवस्थाको मान्छेसंग बहस गर्नु हुन्न भनेर सिकाए।" अर्काले लेखेका थिए, "मेरो गुरु मेरी पूर्व प्रेमिका हुन्। ज्यान दिएर बिश्वास नगर्नु भनेर मलाई उनले नै सिकाएकी हुन्।"
हरेक व्यक्तिको भावना र अनुभवको कदर हुनुपर्छ। तर गुरु शब्द उपहास र ठट्यौलीको बिषय होईन।
हामी स्कूल पढ्दा बिहान दश बजेदेखि बेलुकी चार बजेसम्म आठजना शिक्षकहरुले क्लास लिन्थे। ती सबैलाई म गुरु मान्दिन। ती मध्ये धेरै जना तलाबजीवी शिक्षक थिए। शिक्षक र गुरुमा बिशाल अन्तर देख्छु म। कतिपय शिक्षक आउंछन्, आफ्नो तयारी नोटबूक पढेर भट्ट्याउंछन्। हुबहु सार्न लगाउंछन्। अनि भन्छन, "यति घोकेपछी तिमीहरु पास हुन्छौ " ती गुरु के गुरु?
सिद्दार्थ बनस्थली स्कूल पढ्दा मैले दुईजना गुरु पाएको थिएँ। कवि भीमदर्शन रोका र हरि घिमिरे। भीमदर्शन रोका अब यो संसारमा हुनुहुन्न। हरि सर अहिले नेपालको थात्बात छोडेर यतै अमेरिकाको भर्जिनियामा हुनुहुन्छ। भीमदर्शन सर शनिवारको बाहेक अरु कुनै बिदाको दिन आउनु एकदिन अघिनै मेरो कठालो समात्नुहुन्थ्यो। "भोली के गर्दैछस?" उहाँको बोलीमा एउटा जादू हुन्थ्यो। "ब्रिटिश काउन्सील भोली खुल्छ, गैर यो किताब पढेस। नोट बनाएस, अनि पर्सी मलाइ देखाएस। नत्र म संग नबोल्नु।" उहाँले मलाई लाईब्रेरी जाने बानी लगाइदिनुभो। देखाएको नोट हेरेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, "तैंले त्यो किताबको यो "पार्ट"मा ध्यान दीइनस। फेरी पढ।
मलाई आश्चर्य लाग्थ्यो। उहाँ यस्तो कुरा म संग मात्र गर्नुहुन्थ्यो। मैले अमेरिकामा त्यति अंग्रेजी सिकेको छैन, जति उहाँले मलाई क्लासरुम बाहिर सिकाउनुभयो।
अर्का हरि सर नेपालीका गुरु। मेरो "होमवर्क" हेरेपछि उहाँ अरु सेक्सनमा गएर भनिदिनुहुँदो रहेछ, "सेक्सन ए को राजेशले लेखेको हेर। तिमीहरु पनि त्यस्तै कोशीश गर।" बिस्तारै म संग नोटबुक "बरो" गर्न आउनेको संख्या थपिन थाल्यो। "ओहो, अब यो भन्दा कमजोर लेख्यो भने त मेरो बेइज्जत हुन्छ," भन्ने "ईगो" ले मलाई झन् मेहनत गर्न बाध्य तुल्यायो। हरि सर मलाई किताब र अखबारका कटीङ्गहरु खुब दिनुहुन्थ्यो। उहाँले सिकाएको नेपालीका कारण मैले आफ्नो पत्रकारिताको यात्रामा कहिल्यै लज्जित हुनुपरेन।
गणित र बिज्ञान पढाउने शिक्षकहरु पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँप्रति मेरो सम्मान नभएको होईन। तर ती बिषयमा मेरो रुचि त्यति थिएन। त्यसैले ती बिषयले मेरो जीवनमा त्यति प्रभाव पार्न सकेनन। गुरु त्यो हो जसले सिकाएको कुरा जीवन पर्यन्त याद रहोस।
आज चन्द्र ग्रहण लागेकोबेला शास्त्र अनुसार कुनै शुभकार्य नगर्नु भन्ने मान्यता छ। चन्द्रग्रहण हरेक बर्ष आऊंछन् ,जान्छन, तर वास्तविक प्रभाव पार्नेगरी थोरै गुरु मात्र आऊंछन् जीवनमा। उनीहरुको सम्झनाले अशुभ भनिने ग्रहण पनि मेरा लागि शुभ छ।
विप्लव समूहका कोशी ब्युरो संयोजक 'पुष्कर' पक्राउ
विष्णु पाैडेललाई उन्मुक्ति दिने चलखेल सुरु
7th Mar 2019 पिएसजे टिभी
काठमाडौं: नेपाल बैंक लिमिटेडले रु दुई अर्ब २४ करोड ५५ लाख खुद मुनाफा गरेको छ । बैंकले आज चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरी उक्त कुराको जानकारी दिएको ...
काठमाडौं : खाननेपानी निर्यातको सम्भावनाबारे खानेपानीमन्त्री विना मगर र नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हेलबीच छलफल भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा मंगलबार भएको भेटमा नेपालबाट पिउनेपानी निर्यात गर्ने ...